के–कती मासु खाँदा शरिरलाई फाईदा | Makalukhabar.com
माघ २७ । मासु सबैको प्रिय खाना हो । हामी सबै मांसाहारीको भान्छामा प्रायजसो हप्तामा एक,दुई छाक मासु त पाकेको नै हुन्छ । मासु खान मन पराउँनेलाई खानामा एक,दुई छाकपछी मासु भएन भने खाना खानु नै मन लाग्दैन । मासु खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि फाईदा पुगीरहेको हुन्छ । मासुबाट हाम्रो शरीररले प्रोटिन प्राप्त गर्छ । एउटा स्वास्थ्य मानिस हुनको लागि फलफुल जस्तै मासु खानु जरुरी हुन्छ । तर कुनै व्यक्तिले मासु खाँदा उनको उमेर अनुसार के– कती खाँदा सही हुन्छ त्यो जानेर खाएमा झन् राम्रो हुन्छ । कुन व्यक्तिले मासु कति खाने र के कसरी मासु खाँदा सही हुन्छ तल दिएको छ ।
– एउटा जवान मान्छेले एक दिनमा २५० ग्राम सम्म मासु खान राम्रो हुन्छ । मान्छेको एक किलोग्राम तौलका लागि एक ग्राम प्रोटिन आवश्यक हुन्छ । दुई सय ५० ग्राम खसीको मासुमा सरदर ५० देखी ५५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । थप प्रोटिन अन्य खानाबाट पाइन्छ ।
– मधुमेह, उच्चरक्तचाप, मृगौलामा समस्या, कोलेस्ट्रेरोल बढी भएका व्यक्तिले बोसो नभएका मासु सकभर उसिनेर खानु राम्रो हुन्छ । अझ उसिनेको मासुमा हल्का जिराको धुलो र कागती राखेर खानु उत्तम मानिन्छ ।
– मासु खाएपछि शरीरलाई हलचल वा व्यायम गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसो त शरीरका लागि नियमित रुपमा ४५ मिनेट जति हिडनु राम्रो हुन्छ । मासु खाएका बेला पनि सो प्रक्रियालाई थप्न सकिन्छ ।
– ग्यास्टिकले नसताओस भन्नका लागि सकभर उसिनेको वा रसयुक्त मासु खान लाभदायी हुन्छ ।
– मासु खाइसकेपछि असहज महसुस भएमा कागती पानी वा ज्वानो पानी खान सकिन्छ । यसले असहजता हटाउन मद्धत गर्छ ।
मासिक वृद्ध भत्ता ५ हजार पुग्छः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
योगा तथा ध्यान गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा यतीका धेरै फाईदा
साउन ७ । योगा तथा ध्यान गर्नु मानव स्वास्थका लागि निकै फाइदा जनक रहेकाे छ । ध्यान र योगाले मानव शरिरमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याउने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । किनभने ध्यान तथा योगा गर्ने बानीले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्याउने विभिन्न अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेको पाईन्छ । सबैलाई योग गर्ने बिधि... जारी राख्नुहोस...
अनुहारकाे पाेताे हटाउन यस्ताे गल्ती बिर्सेर पनि नर्गनुस्, झन् बढ्न सक्छ
साउन ६ । अनुहारको छाला राम्रो होस सबैको चाहना हुन्छ ।तर धेरै मानिस कालो पोतो आएर हैरान भइरहेको हुन्छ । बिशेष गरेर महिलाहरु आमा बन्ने भनौ या गर्भअस्थाको बेलामा अलिबढी अनुहारमा कालो पोतो आउने गर्दछ । छालामा यस्तो खालाको दाग धब्वा सामान्य अवस्थामा पनि आउने गर्दछ । यस्तो खालको समस्या पुरुषमा भन्दा महिल... जारी राख्नुहोस...
पिसाव पोल्ने समस्याबाट यसरी छुट्कारा पाउनुहोस्
साउन ५ । पिसाव खुलेर नआउने वा कम आउनाले पिसाव पोल्ने गर्दछ । आजभोली पिसाब पोल्ने समस्याले धेरै व्यक्ति ग्रसित छन् । कति पय मानिसहरु यो समस्यालाई सानोतिनो समयस्या भनेर वास्ता नगर्नेहरु पनि छन् तर यी समस्याको बारेमा बेलैमा होस् पुर्याएन भने यसले भोलि गएर ठूलो रोग निम्ताउन सक्छ । दिनानु मानिसहरु निकै... जारी राख्नुहोस...
टाउकाे दुखेकाे बेला बियर पेनकिलरकाे बराबर
साउन ३ । ‘मादक पदार्थ स्वास्थका लागि हानिकारक छ ।’ मादक पदार्थ सेवन गर्नु गैरकानुनी र असामाजिक मानिन्छ । मादक पदार्थ सेवन गरी समाजमा होहल्ला गर्ने मानिसलाई समाजले निकै तल्लो स्तरमा राखेर हेर्ने गर्छन् । बियर पनि मादक पदार्थमा नै पर्ने पेय पदार्थ हो । बियर पिउनुलाई पनि राम्रो मानिदैँन ।... जारी राख्नुहोस...
तालु खुइलिने समस्याबाट यसरी छुट्कारा पाउनुस्
श्रावण २। तालु खुइलिने अर्थात तालुको रौँ झर्ने समस्या युवाहरुमा पनि देखिन थाएको छ। उमेरको परिपक्कताको चिन्ह मानिने, तालुको रौँ झर्नु आजभोलि जोकोहीमा देखिन सक्ने समस्या बनेको छ। डिहाइड्रेसन हर्मोनको सन्तुलन विग्रनाले तालुको रौँ झर्ने गर्दछ। साथै खानपान तथा तनावको कारणले पनि अगाडिको रौ झर्ने हुन्छ ।... जारी राख्नुहोस...
एजेन्सी । शरीरका रक्तनलीहरूमा रगतको चाप बढी हुनु नै उच्च रक्तचाप हो । नलीहरूमा रगतको वेग सामान्यभन्दा बढी हुनु नै उच्च रक्तचाप हो । यसले शरीरका जुनकुनै अंगमा हानि पु-याउन सक्छ । मस्तिष्कघात, पक्षघात, हर्टअट्याक, मिर्गौला ड्यामेजजस्ता समस्या उच्च रक्तचापका कारण हुन सक्छ । त्यसैले रक्तचाप जहिल्यै नियन... जारी राख्नुहोस...
वीपी प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिमा डा.खनाल नियुक्त, डा. रौनियार अझै टंगालमा
धरान, १ साउन । धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिमा प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु प्रसाद खनाल नियुक्त भएका छन् । उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई घुस/रिसवत सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको र अख्तियार द... जारी राख्नुहोस...
यस्ता संकेत देखिए हुन सक्छ हैँ ! तपाईलाई मृगौला क्यानसर
श्रवण १ । खानपानमा ध्यान नदिदा तथा सामान्य रोगको समयमै उपचार नगर्दा ठूलो रोगको शिकार भइन सक्छ। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न खानपिन तथा शारिरीक कसरतमा समेत ध्यान दिनु पर्दछ। पछिल्लो समय महिला वा पुरुषमा मृगौला क्यान्सरको समस्या बढ्दै गएको छ। मृगौला क्यान्सरका कारण धेरैले आफ्नो ध्यान समेत... जारी राख्नुहोस...
साउन १, विराटनगर । नोबेल शिक्षण अस्पतालले ‘ओपन हार्ट सर्जरी’ अर्थात् छाती चिरेर गरिने मुटुको शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको छ । अत्याधुनिक उपकरण र दक्ष चिकित्सकको व्यवस्था मिलाएर नोबेलमा मुटुको अप्रेशन थालिएको हो । सुरुवातमा तीन जना बिरामीको सफलतापूर्वक मुटुको शल्यक्रिया गरिएको नोबेल अस्पता... जारी राख्नुहोस...
यी घरेलु बिधीबाट यसरी अनुहार गोरो र चम्किलो बनाउनुहोस्
असार ३१ । अनुहार सुन्दर स्वास्थ्य, गोरो चम्किलो होस् भन्ने जो कोही पनि चाहन्छन् । यही अनुहारको लागि मानिसले धेरै मंहगो खर्चहरु गर्ने गर्देछ । आफ्नो अनुहार सुन्दर बनाउनको लागि मानिसहरु धेरै मंहगो-मंहगो कस्मेटिक सामानको प्रयोग गरि रहेका हुन्छन् भने आफू सुन्दर हुन धेरै मानिसहरु पार्लर समेत धाउने गर्दछन... जारी राख्नुहोस...